Kedu otu ị ga - esi nwee ọganihu na Amazon na - achọgharị mkpụrụokwu kachasị mma kachasị mma?
O di nwute, enweghi ntuziaka doro anya ma ọ bụ ihe omume ọ bụla site na nkwụsị nke nwere ike ịkwado ngwaahịa gị ga-ahụ nke ọma na Amazon chọọ maka ndị na-ere ahịa. Na ọtụtụ nde ndị ahịa na-azụ ahịa, ọtụtụ puku ngwaahịa na-enye, na ọmarịcha ọchụchọ ọchụchọ algorithm Amazon bụ nnọọ asọmpi ebe maka ere. Na ebe a bụ mgbe njirimara nchịkọta ngwaahịa gị na-abata - jagermeister shop italia. Ekwuru m na site n'inwe ndepụta kachasị mma nke mkparịta ụka ndị kachasị elu, ị nwere ike ịrịgo elu n'elu Amazon iji chọpụta ahịa ndị dị mkpa. Ma olee otu esi achọta isiokwu kachasị mma na mpịakọta ọchụchọ kachasị elu ma ka obere asọmpi? N'okpuru ebe a, m ga - egosi gị ntụziaka dị mkpirikpi iji mee ka ọ dịkwuo mfe, ma ọ dịghị ihe ọzọ ndị metụtara isiokwu nyocha na Amazon.
Chọta Mkpụrụ Mkpụrụ Obi
Ọ bụrụ na ị maghị kpọmkwem isi isiokwu ndị ị ga-eji mee ihe maka ngwaahịa gị na Amazon, ebe a bụ mmalite gị. Ihe mbụ a ga-eme bụ ịchọta mkpụrụ osisi. M na-ekwu na mgbe ị nwere ngwaahịa maka ire ere, ọ bụ oge iji chọpụta ọnụọgụ ọchụchọ, dịka ịchọta nnukwu foto nke ogologo oge ịchọta ahịrịokwu nke ndị na-azụ ahịa na-eji. M na-akwado iji Google Planner dịka ihe ngwọta gị nke ọma iji ghọtakwuo iwu nke egwuregwu ahụ ịchọrọ ịchọta na Amazon ịchọrọ ịchọta ndị ahịa.
Kpọrọ ihe ọnụ ọgụgụ
Nzọụkwụ ọzọ ị ga-eme bụ ịmepụta okwu mkpokọta abụọ site na isi mmalite - ezigbo ihe ịchọrọ ịchọta ịchọta, yana isiokwu ndị dị elu na ogologo ọdụdụ nke ọma jiri ndị asọmpi gị. Nke a bụ mgbe Amazon isiokwu nchọpụta na nsuso ngwaọrụ abata play! N'ụzọ dị nro, enwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche (ya bụ, ngwá ọrụ pụrụ iche, ntanetị n'ịntanetị, ma ọ bụ ndapụta nchọgharị) dị na Web. Mụ onwe m ga-akwado ịme ntụrụndụ na-agba ọsọ, jikọtara ya na nyocha omimi nke ezigbo mmasị ịzụ ahịa site na iji otu n'ime ngwaọrụ ndị a na-eme iji nyochaa ọchụchọ Amazon maka ohere maka ịchọta isiokwu: KeywordInspector, Scope, JungleScout, or AMZ abụba abụba Ngwunye ihe nchọgharị.
Nyochaa Metrics Key - na Ị meela
Ka a sịkwa ihe ị ga-eme site na ọtụtụ puku echiche dị iche iche nke yiri nwere ike imeri. Ma olee otu esi ekwu ezigbo aro site na ụfọdụ ndị na-enweghị ezi uche? Nke a bụ usoro ọnụọgụ abụọ maka gị ịgbanye ndepụta nke isi okwu ọchụchọ gị n'ime ihe omume dị mkpirikpi:
Chọọ Mpịakọta - n'ụzọ dị mfe, igosi ọchụchọ ọchụchọ gosiri otú ewu ewu ọ bụ n'ụwa niile. Echere m na ọ bụghị site n'ahịa Amazon, nchịkọta ọchụchọ niile na-enye anyị nghọta sara mbara nke isiokwu ntinye aha na Google na ndị ahịa ahịa.
Clicks - ga - enyere gị aka ịghọta ezigbo nnwepụta okporo ụzọ nke otu mkpụrụ okwu. Ma ọ bụ, nke ọzọ, ịmara ọnụọgụ ma ọ bụ okporo ụzọ nke ọkaibe gị kachasị mma ma ọ bụ ndị na-asọmpi egwuregwu, ị nwere ike ịnweta ụfọdụ okwu bara uru na-egosiputa arụpụta kachasị elu na Amazon.
Okwu mgbagwoju anya - tụlee nsogbu ogologo na ogo maka isiokwu ọ bụla ma ọ bụ okwu ogologo oge tupu ị na-arụ ọrụ njirimara ntanetịpụta gị maka onye ọ bụla. M na-ekwu na ihe kasị sie ike ebe a bụ ịchọta ihe dị mma n'etiti azụmahịa ha na uru ego. Chetakwa, ị na-achọ ịchọta isiokwu ndị ahụ ka ndị ezigbo mmadụ ga-eji mee ihe, ọ bụghị search engines.